Vatsigiri venhabvu vari kuyambira murairidzi wemaWarriors, Sunday Chidzambwa, kuti asunge dzisimbe pakudoma chikwata chake chemutambo mukuru weAfrica Cup of Nations ne Congo Brazzaville
Chidzambwa ayambirwa kuti asadzokorore zvakaitika muna 1991 apo varairidzi vemaWarriors, Amando Ferreira naBen Koufie, vakasandura chikwata chavaishandisa mazuva ese mumutambo wekugumisira ndokubuditswa mumakundano aya neCongo Brazzaville iyoyi.
Gore iroro Ferreira na Koufie vakakanda kunze mubati wepagedhe, Peter Fanuel, uyo vaishandisa mazuva ese ndokukakanda mudariro John Sibanda, uyo akavhiringika mutambo wave kupera ndokukanda bhora mumambure make nekupa Congo Brazzaville mukana wekuenda kuma fainari e 1992 Africa Cup of Nations.
Chidzambwa ari kutarisirwa kudoma chikwata chake chemutambo weCongo kana nguva asi abuda pachena kuti ari kutarisa vatambi vatsva vakaita saMaCaulley Bonne uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuEngland naKelly Lunga uyo anotamba kuGermany.
Asi vateveri vemutambo wenhabvu kusanganisira, VaTapera Museti, vanoti Chidzambwa anofanira kushandisa vatambi vaanoziva mazuva ese kwete kuunza vatambi vatsva mumutambo wakakosha uyu, izvo vanoti zvingangokonzera dambudziko.
VaSimon Chuma avo vaimbotambira Dynamos vanobvumiranawo naVaMuseti vachiti ivo ino haisiri nguva yekuedza vamwe vatambi asi kushandisa vatambi vasvitsa maWarriors pavari pari zvino.
MaWarriors ari kungoda poindi imwe chete mumutambo uyu kuti vabudirire kuenda kumafainari eAfrica Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna Chikumi.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association, VaSimbisai Shonhiwa, vanoti varairidzi vechikwata ichi hafanire kuita shanduko muvatambi panguva iyo pari kudikanwa vatambi vatamba pamwechete kwenguva yakareba.
Asi nhengo yeZimbabwe Warriors Fan Club, VaKudzai Mudarikwa, vanoti sezvo Zimbabwe iri kuda kukunda chete kuti iende kumafainari pari kudiwa vatambi vechidiki vanobva mhiri kwemakungwa kuti vabate basa iri.
VaMudarikwa vanoti havasi kuona maWarriors achinyanyonetseka kukunda pamutambo uyu.
Pari zvino, maWarriors ndiwo ari pamusoro pegungano rezvikwata zvina iri nemapoinzi manomwe vachiteverwa neCongo DR iyo ine mapoinzi matanhatu.
Congo Brazzaville neLiberia dzakabatana pamapoinzi mashanu.
Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya.
Zvichakadaro, zvikwata zvenhabvu yepamusoro zvePremier Soccer League zvapihwa kusvika kupera kwezuva ranhasi kuti zvinyorese vatambi vazvo mwaka uno.
Zvikwata izvi zviri kufanira kunyoresa vatambi makumi maviri nevashanu uyezve vamwe vashanu avo vane makore ari pasi pegumi nemapfumbamwe.
Mutauriri we PSL, Muzvare Kudzai Bare, vanoti vaitira izvi kuti vawane nguva yekuongorora kuti vatambi ava vanokodzera here kutambira zvikwata izvi mwaka uno.
Zvikwata zviri kufanira kuendesa kuPSL zvekare zvibvumirano zvebasa zvazvakanyorerana nevatambi vazvo.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga musi wa 30 Kurume.